China Palletizing robhoti Mugadziri uye Mutengesi |Yunhua
Seimwe yemhando dzinopisa dzePalletizing uye Depalletizing, HY1010A-143 inogona kushandiswa kune akasiyana chigadzirwa.
-Inokodzera zvikamu zvidiki Palletizing uye Depalletizing;
-Compact chimiro uye Nyore Chengetedza;
-Unhu hwakanaka uye mutengo
Palletizing (Palletizing) zvinoreva kushanda kwekuisa chinhu chakaita sebhokisi rine makora panhovo kana chimwe chinhu chakafanana nenzira yakatsanangurwa.Depalletizing (Depalletizing) zvinoreva kushanda kwekuburutsa chinhu chakaremerwa nereverse pattern.
Seimwe yemhando dzinopisa dzePalletizing uye Depalletizing, HY1010A-143 inogona kushandiswa kune akasiyana chigadzirwa.Unogona kushandisa mabhokisi madiki, mabhegi madiki emupunga, nezvimwewo iko compact dhizaini uye chimiro chinoita kuti HY 1010A-143 ive nyore kuchengetedza.
6 10KG ±0.08 3 kva 0-45 ℃ Hapana hunyoro 170 kg Pasi/denga IP65
180°/S 133°/S 140°/S 217°/S 172°?S 210°/S
10KG 6 Axis palletizing robhoti
6 Axis robhoti palletize solar cell
Mhinduro dze10kg robhoti palletizing application
Q1.Robhoti palletizing mutengo unoshanda rinhi?
A. tora China semuenzaniso, ikozvino Vashandi muhoro wakakwira zvakanyanya, kunyanya vashandi.Kana ukashandisa YOO HEART robhoti uye mumwe technician anoziva robot zvakanaka, unogona kuderedza 3-4 mari yevanhu.
Q2.Ndeapi marudzi ezvigadzirwa zvinogona kuve palletized ne robot
A. zvigadzirwa zvakawanda zvinoda palletized kana depalletized zvinogona kushandisa Robhoti.
Q3.Ndeipi iyo yakakura payload yePalletizing robhoti
A. Parizvino, 165kg ndiyo yakanyanya kubhadharwa, asi kubva muna Chivabvu 2021 zvichienda mberi, pachange pave ne250kg yekuisa palletizing uye kubvisa palletizing.
Q4.Can robotic palletizer inomhanya kupfuura chigadzirwa chimwe panguva
A. mibvunzo miviri inotariswa, 1, huremu hwese, pamwe chete nehuremu hwemakombi hunofanira kushoma pane marobhoti akatemerwa mubhadharo.2, zvisungo zvakakura zvakakwana kubata chigadzirwa.
Q5. ndezvipi zvakanakira iwe zvichienzaniswa nemamwe maChinese brand.
A. zvakanaka, YOOHEART robhoti ndiyo yekutanga Chinese industrial robhoti brand, tinotanga kugadzira robhoti kubva 2013, uye zvachose akatengesa anenge 15000 unit pasi rose.Sevamwe mhando, CRP, JZJ, JHY, QJAR, angori makore mashoma.Isu tinoshandisa yedu pachedu RV reducer, uye zvikamu zvese zvinoshandisa Chinese brand, ndosaka tichigona kuderedza mutengo wemarobhoti uye rega vatengi vese vashandise yakanaka mhando marobhoti nemutengo wakaderera.
Zvakapfuura: Palletizing robhoti Uye Depalletizing robhoti
Zvinotevera: Kupenda robhoti HY1050A-200